XOG: Koonfur Galbeed” Isbaarooyinka Yaala Shabeelada Hoose Waqtigooda wuu dhamaaday Shacabka Nabad ayey ku Marayan Wadada – Kismaayo24 News Agency Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284
XOG: Koonfur Galbeed” Isbaarooyinka Yaala Shabeelada Hoose Waqtigooda wuu dhamaaday Shacabka Nabad ayey ku Marayan Wadada
by admin 19th March 2016 030
Wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed C/Fitaax Maxamed Geesey oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay qorshe ay soo bandhigeen guddiga amniga maamulka Koonfur Galbeed,kuwaas oo uu dhawaan sameeyay madaxweynaha maamulkaasi Shariif Xasan Sheekh Aadan.
C/Fitaax Geeseey ayaa sheegay in guddiga ay soo jeediyeen qaadista Isbaarooyinka yaalla, waxaana la tilmaamay isbaarooyinka ugu badan in ay yaallaan gobolka Shabeelaha Hoose iyo sidii loo qaadi lahaa howlgal ka dhan ah Al-shabaab.
Waxaana dhanka kale uu tilmaamay in Odayaasha ay ka aqbaleen aragtidaasi,sidoo kalena madaxweynaha maamaulkaasi Shariif Xasan Sheekh Aadan ayuu sheegay in uu aqbalay qodoabada ay soo jeediyeen ee la xiriira sugidda amaanka maamulka Koonfur Galbeed.
Hadalka Wasiirka amniga Maamulka Koofur Galbeed C/Fitaax Maxamed Geesey ayaa imaanaya xilli maalmihii u dambeeyay maamulka Koonfur Galbeed ay wadeen dadaalo lagu sugayo amniga.
Top News :- Wufuudi caalami ah oo kismaayo so gaartay iyo Xafladii oo…
SAWIRO: Ugaaska Beesha Murursade iyo ergooyin kale oo gaaray Caasimada Dhuusomareeb.
UPDATE: Dableey hubeysan oo hadda ku jirta agagaarka dhagaxtuur, Hotel Siyaad ilaa Hotel SYL.
Galmudug oo wafdi isugu jira wasiiro iyo xildhibaano u dirtay deegaanka xeraale oo dhawaan dagaallo ay ka dhaceen
Tifaftiraha K24 28th August 2017